Andraikitry ny holafitry ny mpanao gazety “Tsabahan’ny minisiteran’ny serasera”
Mamarana ny fotoam-piasany amin’ity taona ity ireo mpikamban’ny birao voafidy teo anivon’ny holafitry ny mpanao gazety tao anatin’izay 5 taona izay.
Amin’ny ankapobeny dia nifantoka tamin’ny fiarovana ny fanaovan-gazety sy ireo mpanao gazety manatontosa ny andraikiny ary ny fiezahana nanadio ny tontolon’izay fanaovan-gazety izay ny praograman’ny OJM, hoy ny fanazavana. Mitohy izay asa fanadiovana izay ary dingana heverina hahatongavana amin’izany ny famoahana karatra maha matihanina vaovao. Misedra olana anefa izany ankehitriny, hoy ny filohan’ny OJM, Gerard Rakotonirina, satria ny minisitry ny serasera, izay nilaza ampahibemaso fa tsy hitsabaka amin’ny andraikitry ny OJM no mitsabaka ankehitriny ary manery ny mpanao gazety, indrindra, ireo amin’ny haino aman-jerim-panjakana. Ny holafitra nasionaly no tokony hiandraikitra io famoahana karatra io kanefa dia nafindra toerana any Maintirano ny sekretera jeneraliny. Banga, noho izany, ny toerany. Miankina amin’ny fivoahan’izay karatra izay ihany koa anefa no hahafahana manatontosa ny fifidianana izay ho mpikamban’ny OJM vaovao, raha ny fanazavana hatrany. Notontosaina ny sabotsy teo tetsy amin’ny Trass Tsiadana moa ny lanonana fifampiarahabana nahatratra ny taonan’ireo mpikamban’ny OJM sy ny fianakaviambeny.